Umbuso weSelfowuni eMelika | Martech Zone
Ukusetyenziswa kwefowuni phakathi kwabathengi kuyaqhubeka nokunyuka. I-74% yokukhula yayikwi-smartphones ene-79% yabathengi base-US abakhangela kunye nokuthenga kwiindawo kunye neeapps. Ngo-2016 imali engenayo yesoftware iya kufikelela kwi-46 yezigidi zeedola. Ukulinganisa ukuba olu tshintsho lukhulu luthetha ntoni kwimveliso yabantu Ukusebenziseka Beka ndawonye i-infographic ebonisa ukuba kungakanani ukusetyenziswa kwe-Intanethi okutshintsha indlela abathengi abanxibelelana ngayo neempawu kwiwebhu.
I-Usablenet inika amandla iisayithi ezihambahambayo kunye namava emultichannel kubathengi abangaphezulu kwama-400 kubandakanya uninzi lwabathengisi abaphambili behlabathi, ukuhamba kunye neempawu zenkonzo.
tags: izinga lokuguqulwaIindlela zokuthenga ngeholideiiholideapps mobileukuthengiswa kweselulaiwebhu ehambayoiiholide zokuthenga kwi-Intanethiukuthengiswa kwethebhulethiamacwecweixesha elichithwayo
Abazange bafundise oku kwiKlasi yokuThengisa
Ithuba lokuThengisa iBeacon